Mpanamboatra jiro finday tsy misy fipoahana - Shina Mpamatsy sy orinasa mpanamboatra jiro finday tsy misy fipoahana
MSL4700 andian-dahatsoratra Multifunction paosy tsy mipoaka jiro
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solitany, fanadiovana solika, simika, miaramila ary tontolo mampidi-doza hafa ary toeram-pitrandrahana solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho an'ny fitsirihana sy jiro finday;
2. Mety ho an'ny tontolo iainana entona mipoaka faritra 0, faritra 1, faritra 2;
3. Atmosfera mipoaka: kilasy IIA, IIB, IIC;
4. Mety amin'ny tontolo iainana vovoka mirehitra ao amin'ny faritra 20, 21, 22;
5. Mety amin'ny toerana mitaky fiarovana avo, hamandoana ary entona manimba.
JM7300 andian-jiro kely tsy mipoaka
IW5510 andian-dahatsoratra Jiro fiasana fanaraha-maso tsy misy fipoahana maivana azo entina
IW5130/LT andian-jiro kely tsy misy fipoahana
BS51 andian-tselatra tsy mipoaka
1 .Ampiasaina betsaka amin'ny fitrandrahana solika, fanadiovana solika, simika, miaramila ary tontolo mampidi-doza hafa ary sehatra solika any ivelany, sambo mpitatitra solika ary toerana hafa ho an'ny fisavana sy jiro finday;
2.Mety amin'ny tontolo iainana entona mipoaka faritra 1, faritra 2;
3.Atmosfera mipoaka: kilasy ⅡA,ⅡB, ⅡC;
4.Mety amin'ny tontolo iainana vovoka mirehitra ao amin'ny faritra 22, 21;
5.Mety amin'ny fepetra fiarovana avo, toerana mando.
BS52 andian-jiro azo entina miady amin'ny fipoahana